The Motorola Athena na-esi na Snapdragon 662 na 4 GB RAM | Gam akporosis
Motorola Athena pụtara dị ka etiti dị n'etiti na Snapdragon 662: n'oge na-adịghị anya ọ ga-abanye n'ahịa ahụ
Motorola na-akwadebe ịmalite smartphone ọhụrụ nke, dịka arụmọrụ sitere na processor chipset nke ejiri ya, ọ ga-abụ ọnụ ọgụgụ dị n'etiti na, dị ka atụmanya, ọnụ ala.
Na ajụjụ, ngwaọrụ ga - abata Motorola athena ọ pụtawo na nyiwe abụọ, nke Google Play Console na Geekbench, akara aka na nke a na-arụ ọrụ dị ka ntụaka iji gosipụta ụfọdụ njirimara ya na nkọwapụta teknụzụ.
Nke a bụ ihe anyị ma ruo ugbua gbasara Motorola Athena
Dabere na ihe a na-agbanye na Google Play Console, Motorola Athena ga-abụ mkpanaka nke na-erute n'ahịa nwere ụdị ngosipụta ihuenyo, nke ga-abụ obere bezels na obere ụda chin, yana ọkwa dị ka ọdịdị otu ntapụ mmiri nke ga-enwe ọrụ nke inye igwefoto selfie pụrụ iche nke ọnụ ya ga-etu ọnụ.
Ihe ọzọ anyị nwere ike ikpughe site na ndepụta ahụ bụ nke ahụ Ọ nwere ebe nchekwa RAM nke 4 GB na Snapdragon SM6115 mobile platform, nke kwesiri ikwekọ na Snapdragon 662, asatọ-isi processor chipset na a kacha elekere ugboro nke 2.0 GHz. N'ihi njirimara ndị a, a na-eche na ọ ga-abụ ngwaọrụ ọnụ.
N'aka nke ọzọ, ịga n'ihu na isiokwu ihuenyo ekwentị, Motorola Athena ga-abata na HD + panel nke 1.600 x 720 pikselụ mkpebi, ebe pixel njupụta nke ya ga-abụ 280, nke dị ntakịrị ala. E wezụga nke ahụ, ọ ga-enweta elele nke gam akporo 10 dị ka sistemụ arụmọrụ na mbụ.
Geekbench anaghị emegide data sitere na Google Play Console ma gosipụta na ekwentị ahụ ga-abịa na 4 GB Ram, gam akporo 10 dị ka sistemụ arụmọrụ na Qualcomm si Snapdragon 662 processor chipset. Na mgbakwunye, ọ na-ekpughe na ụdị nnwale ahụ jisiri ike were akara ihe ruru 1.523 na nyocha nke otu na ihe dị ka 5.727 na ọtụtụ nyocha.
Anyị ga-ama njirimara ndị ọzọ nke ekwentị ma emechaa, yana nkọwa nke ọnụahịa na nnweta na ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Motorola Athena pụtara dị ka etiti dị n'etiti na Snapdragon 662: n'oge na-adịghị anya ọ ga-abanye n'ahịa ahụ
Mystic Hammer bụ ụlọ elu ọhụrụ na-agbachitere dị ka Osisi na Zombies
[Na vidiyo] Otu esi agbanwe bọtịnụ nchịkwa Chromecast na Google TV